Ozi niile nke nwelite 1.2 nke PUBG Mobile | Gam akporosis
Oge 16 nke PUBG Mobile na-achọ ịkwụsị. O nwere ụbọchị ole na ole fọdụrụ, mana tupu nke ahụ emee, Tencent ekwuputala ụbọchị mmalite nke mmelite na-esote nke agha a ma ama nke royale, nke kwekọrọ na mbipute 1.2.
Ọ bụ Jenụwarị 12 ụbọchị onye nrụpụta ga-amalite ịhapụ mmelite a. Nke a na-ebu ọtụtụ akụkọ, ndozi, mmezi ahụhụ na njikarịcha nke anyị ga-achikota n'okpuru ebe a site na mpempe akwụkwọ patch nke PUBG bipụtara
1 Ndị a bụ akụkọ niile nke mmelite 1.2 nke PUBG Mobile
1.1 Modzọ ọhụrụ, ahụmịhe ọhụụ
1.1.1 Egwuregwu Runic Ike (Jan 12 - March 7):
1.1.2 Ọnọdụ Ike Armor (amalite na EvoGround na February 5)
1.1.3 Metro Royale: Sọpụrụ (bido na Jenụwarị 12)
1.2 Ngwá agha ọhụrụ, nhọrọ ọhụrụ
1.3 Egwuregwu na arụmọrụ ndị ọzọ
1.3.1 Ndozi arụmọrụ
1.3.2 Nche nkwalite
1.4 Basic ahụmahụ ndozi
1.4.1 Lelee mmezi ụdị
1.4.2 Skydiving na ọdịda edinam ndozi.
1.4.3 Njirimara iji kagbuo nkwanye
1.4.4 Ngwá Ọrụ Ngwá Agha - Mmeghachi Omume nke Na-agba agba mgbapụ
1.5 Ndị ọzọ ọdịnaya nke oge ọhụrụ
1.5.1 Oge Royale Na-agafe Oge 17: IKE Ike (Jenụwarị 19 - Machị 21)
1.5.2 New Cheer Park Isiokwu:
1.5.3 Fatịlaịza Ememme (Jenụwarị 13 ruo Jenụwarị 27)
Ndị a bụ akụkọ niile nke mmelite 1.2 nke PUBG Mobile
Modzọ ọhụrụ, ahụmịhe ọhụụ
Egwuregwu Runic Ike (Jan 12 - March 7):
Ndị na-egwu egwu ga-ahọrọ ụdị ụdị ike ha na Spawn Island. Mgbe ịhọrọ ya, ha ga-enweta ikike abụọ, nke ndị a:
Kpọkọta ikike: na-akpọ oku nke ire ọkụ nke na - aga n’ihu nwayọ, na - eme mmebi nke ndị egwuregwu ọ ga - emetụ.
Melite nkà: na-agbakwunye mmetụta na-ere ọkụ na ammo gị obere oge.
Kpọkọta ikike: Na-akpọ oku mgbidi ice. Enwere ike ibibi ihe mgbochi ọ bụla nke mgbidi ice dị iche iche. Mgbe mgbidi ice gosipụtara, ọ ga-ebuli ndị egwuregwu ma ọ bụ ụgbọ ala n'elu ha.
Melite nkà: na-agbakwunye ifriizi mmetụta na ammo maka oge dị mkpirikpi. Kefriza na-ebelata arụmọrụ nke ọgwụgwọ.
Oke ikuku nke ikuku:
Kpọkọta ikike: Na-akpọ oku ikuku ikuku nke na-ebelata mmebi sitere na mgbọ agbapụtara site na mpụga ọta.
Melite nkà: dịkwuo gị ije ọsọ na Akwajuru.
Ọnọdụ Ike Armor (amalite na EvoGround na February 5)
Ndị otu egwuregwu nwere ike ịmaliteghachi na Researchlọ Ọrụ Nyocha.
Obi Armor Ibe: na-ebelata mmebi obi ma na-abawanye ikike azu paaki.
Power Arm Arm Arm: na-ebelata ogwe aka mmebi na enwekwu melee mmebi.
Power Armor Pkwụ Ibe: na-ebelata mmebi ụkwụ na ọdịda mbibi. Na-enye nkà ịgba ọsọ ọsọ.
Chịkọta Armgha Ngwá Agha zuru ezu na-emeghe ngwá agha ya kachasị elu, Dragọn's Breath Grenade.
Ihe ngosi 1: Mmepụta mpaghara ka mma.
Matrix 2 Omume: Otutu Matrix weputara na nnabata di elu karie na nke obula.
Ihe ngosi 3: A na-arụ ọrụ ndị na-achọpụta ndụ na ụlọ ọrụ nyocha ma nwee ike iji chọpụta ndị egwuregwu gbara ya gburugburu.
Metro Royale: Sọpụrụ (bido na Jenụwarị 12)
Kacha ọhụrụ isi.
New Metro Royale nsọpụrụ usoro.
Sodị egwu ọhụụ.
Mmezi Metro Royale.
Ngwá agha ọhụrụ, nhọrọ ọhụrụ
Egwuregwu ọhụrụ na-eji mgbọ 5.56mm. Enwere ike itinye ya gburugburu 25 ma nwee ọkụ ọkụ kachasị ọsọ n'etiti egbe.
Enwere ike ịkwado ya (egbe), akụrụngwa na mag (rifles).
Ọ na-egosi naanị na map Livik, nke naanị PUBG Mobile.
Egwuregwu na arụmọrụ ndị ọzọ
Mgbakwunye nkwanye ikike ka ngwugwu mepee ngwa ngwa oge izizi ha mepere.
Mee ka ike nke ngwaọrụ iOS dị elu dị elu iji mee ka ngwaọrụ ghara ịdị oke ọkụ.
Ndị ọrụ gam akporo nwere ike iji njirimara melite mmelite iji melite akụrụngwa egwuregwu, na-ebelata oke nke nbudata akụ chọrọ iji malite egwuregwu ahụ.
Nchịkọta Mpaghara Nche ọhụrụ na-eche ka ị chọpụta ha.
Nchọpụta mbanye anataghị ikike maka ebumnuche akpaaka, ọhụụ X-ray, ịwụli elu ogologo, na ngagharị ndị na-agagharị agagharị.
Nchọpụta emelitere na nchebe megide nsụgharị na-akwadoghị nsụgharị nke PUBG Mobile ahịa.
Basic ahụmahụ ndozi
Lelee mmezi ụdị
E meziwanyela echiche holographic, na-eme ka ihe nlereanya ahụ doo anya maka ndị egwuregwu.
Ejirila ụdị ihe ngosi X3 ka ọ bụrụ ihe okike.
Skydiving na ọdịda edinam ndozi.
Emeela ka mmegharị ọdịda ahụ ka mma karịa ọsọ ndị egwuregwu na-ada.
Mee ka usoro ọdịda ahụ dịkwuo nro.
Njirimara iji kagbuo nkwanye
Kpatụ bọtịnụ ọkụ mgbe ị na-ebugote ka ị kwụsị ịmegharị ọzọ.
Ngwá Ọrụ Ngwá Agha - Mmeghachi Omume nke Na-agba agba mgbapụ
Nbibi nke Kar98K na M24 ka njọ.
Ebelata oge n'etiti gbaa maka Kar98K na M24.
Obere ntakịrị ọsọ ọsọ nke Kar98K na M24.
Ndị ọzọ ọdịnaya nke oge ọhụrụ
Oge Royale Na-agafe Oge 17: IKE Ike (Jenụwarị 19 - Machị 21)
RUNIC IKE themed interface na ụgwọ ọrụ.
Enyochala ọrụ RP iji belata nsogbu na ịbawanye ụgwọ ọrụ.
New Cheer Park Isiokwu:
Okwu Ike Runic (Jenụwarị 12 ruo Maachị 7).
Nrọ Team isiokwu (February 9 na March 7).
Fatịlaịza Ememme (Jenụwarị 13 ruo Jenụwarị 27)
Denye aha na Prime (ma ọ bụ Prime Plus) na RP Prime (ma ọ bụ RP Prime Plus) n'otu oge iji nweta ego ala na BP Shop na RP Redemption Store, onyinye nbanye kwa ụbọchị, nanị ihe BP maka mgbapụta na nnukwu uru ndị ọzọ.
Nwere ike inyocha miri emi banyere nkọwa nke mmelite ọhụụ a njikọ a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe niile dị ọhụrụ na PUBG Mobile update 1.2 - patch Notes na nkọwa
Etu esi eji oyiri ngwa gha eji ya ihe omuma abuo na MIUI